July 2021 - Umbele I SMME Profiles I Labour I Economics I Agriculture I Executive Interviews I Personal Finance News
UMnu uThabani Mabika, umsunguli weSuits by Thabani Mabika yaseThekwini, KwaZulu-Natali
Waqala ngokwenza into encane osenza izinto ezinkulu. Waqala ngokuthunga uthayi kanti manje usethunga amasudi aphethe isitayela. Uxoxe noZIMBILI MAZIBUKO
INDLELA okugqokwa ngayo esontweni lasePhostoli yayimchaza ngoba yenza abesilisa bahlonipheke kanti yiyo eyatshala imbewu yebhizinisi
UZawadi Yamungu, ogama lakhe wuNkosingiphile Mpanza, wumculi oqhakambisa amahubo, isiNtu nobu-Afrika. I-albhamu yakhe yokuqala ithi HRM Magogo School of Thoughts
Yebo. Ngangiphiwa ngabazali. Ubaba nje wayengipha ngaso sonke isikhathi.
UNkk uZakithi Nkomo, umsunguli weSoft Lending, inkampani ebolekisa ngemali, ne-Asante HR Consulting egxile kwezakwandabazabantu
Uvala igebe embonini yezimali ogxile enkampanini elekelela osomabhizinisi abaphila ngamathenda kahulumeni ukuthi bangawi. Uxoxe noSLINDILE KHANYILE
KWAKUMKHATHAZA ukuzwa inzalo emba eqolo abantu abayikhokhiswa ngomashonisa. Okunye obekumphatha kabi wukuwa kwamabhizinisi abantu abamnyama abathembele kakhulu ekutholeni umsebenzi kuhulumeni ngenxa yokungakhokhelwa ngesikhathi noma ngenxa yokuthi uma sebekhokhelwe imali eningi igcina iphelele komashonisa.
UNgqongqoshe wezeziMali uMnu uTito Mboweni uchaze ngezinhlelo zokuvuselela umnotho ngemva kwezigameko zokutapa nokucekela phansi ingqalasizinda
Izithombe: Zithunyelwe noGoogle
Kunezigidi zokuvuselela umnotho kodwa umphakathi kumele ukuqonde ukuthi ukucekelwa phansi kwengqalasizinda kwenza izwe ligidagide ndawonye. USLINDILE KHANYILE uyabika
UHULUMENI uzohlinzeka ngoR38.5 billion amabhizinisi nezakhamuzi ngezindlela ezihlukene ngenxa yezibhelu zokutapa ezibheduke KwaZulu-Natali nakwezinye izindawo zeGauteng emasontweni amathathu edlule.
UNksz uFundiswa Zwane, umsunguli weCAMAGU by Fundi Zwane ekhiqiza amakha yaseThekwini, KwaZulu-Natali
Ulandela isiphrofetho sikayise nesiko lakubo lamabhizinisi osenebhizinisi leziqholo eliqhakambisa i-Afrika. Uxoxe noSIMANGALISO NTSHANGASE
“BENGIFUNA ukuqhamuka nomkhiqizo owehlukile, okhiqizwe eNingizimu Afrika nozoqhakambisa ubuhle nemvelo yezwekazi i-Afrika.”
Kuzodingeka imizamo ephindaphindiwe kuwo wonke umuntu ukuvuselela umnotho, kuloba uBusi Mavuso
UKUVUSELELA izakhiwo ezicekele phansi KwaZulu-Natali naseGauteng kuzodinga izinhlelo ezihlukene zikahulumeni nemboni yamabhizinisi ezimele. Kunezinkulungwane zamabhizinisi amancane okuphelile ngazo kanjalo nezinkampani ezinkulu.
Ibhizinisi lidinga umholi okwazi ukuqhamuka nezisombululo ezintsha, hhayi odla ngoludala, kuloba uNtokozo Biyela
NJENGOBA amaphaphu esethe ukwehla ezweni, namhlanje ngithanda sibheke isihloko okuthiwa phecelezi yi-design thinking. Sisho indlela ethile yokucabanga ukuze uqhamuke nesisombululo enkingeni ongba nayo ebhizinisini.
UMnu uThabani Bhengu weNdela Farming egxile ekukhiqizeni amaveji, yaseWeenen, KwaZulu-Natali
Ukushintsha unyawo kuthele izithelo kumlimi osenamakhasimende isifundazwe sonke. Uxoxe noSIMANGALISO NTSHANGASE
EQALA ukungena kwezolimo ngo-2006 wayegxile ekulimeni ummbila neklabishi. Ngokuqhubeka kwesikhathi wawuyeka ummbila, wagxila kwezinye izinhlobo zamaveji.
UMnu uMpumelelo Zikalala uchaza umthetho olawula ukuqoqwa kwezikweletu iDebt Collectors Act
UMnu uZamani Hadebe, umsunguli weZamani The Artist, edwebayo yaseThekwini, KwaZulu-Natali
Uyakhula ekuzakheleni igama kwezobuciko umdwebi. Nokho ufisa abantu abamnyama baqonde le mboni. Uxoxe noZIMBILI MAZIBUKO
UTHANDO lokudweba luqale ngenkathi esafunda isikole edweba ayefunda nabo abakhiphe njengoba benjalo. Nokho uthe eseqede isikole akangafundela izifundo zokucija lesi siphiwo njengoba abhalisela izifundo zokukhangisa, i-marketing.
UMnu uXolani Majola, umqondisi we-transformation and diversity eSt Mary’s Diocesan Girls’ College ePitoli
Uyazifela ngokuba wuthisha ozinikele ekuletheni uguquko ezikoleni ezixube ezihlanga. Uxoxe noSLINDILE KHANYILE
KWAKUMCHAZA ukubona indlela uyise ayehlonishwa futhi ejatshulelwa ngayo yizingane azifundisayo nayezifundisile uma zihlangana. Kwamenza walangazelela ukuba wuthisha uma esemdala.
I-TELKOM isimemezele ukuthi isikhulu esiphezulu uMnu Sipho Maseko sizokwehla kulesi sikhundla ekupheleni kukaJuni ngo-2022. UMaseko useneminyaka eyisishiyagalombili ekule nkampani. Ithe seziqalile izinhlelo zokuthola ozovala isikhala.
IBHANGE loMbuso linqume ukungayiguquli imbalimboleko njengoba lithe izokuma ku-3.5%. Lithe lesi kube yisinqumo esithathwe ngo-elethu yikomidi elithatha izinqumo iMonetary Policy Committee. Umhlangano olandelayo waleli komidi umhla ka-23 ngoSepthemba.
INKAMPANI yamahhotela iCity Lodge Hotels isimemezele ukuthi isikuphothulile ukudayisa amahhotela ayo aseMpumalanga Afrika. AseKenya adayiswe ngoR140.9 million, kanti i-UKarium izowakhokhela ukheshi bese kuthi aseTanzania adayiswe ngoR100 million kanti nakhona iFaraja izokhokha ukheshi.
OSOMABHIZINISI bawuncomile uMasipala waseThekwini ngesinyathelo sawo esinqala sokusiza amabhizinisi acekeleke phansi ngezibhelu. Izolo (ngoLwesine) iMeya uMnu uMxolisi Kaunda ihlangane nezikhulu eziphezulu zezinkampani ukuziqinisekisa ukuthi umKhandlu uzibophezele ekuvikeleni amabhizinisi abo. Ethula izinhlelo zeTheku, uKaunda uthe umKhandlu uzobuyekeza isabelomali sango-2021/22 ukuze sibeke eqhulwini uhlelo lokuvuselela umnotho. UmKhandlu uzophuthumisa uhlelo lwezicelo zokwakha ukulekelela amabhizinisi adinga ukuvuselelwa.
UMnu uMfanufikile Dlamini, umsunguli weFam Café yaseRoodepoort, eGauteng
Inkolelo yokuthi abantu kufanele badle zikhathi zonke futhi badle okuhambisana nesikhathi esithile kwenze wasungula ibhizinisi lokudla. Uxoxe noTEBOGO MOKWENA
“NSUKU ZONKE abantu kumele badle, kungaba yisekuseni, yisemini noma ebusuku. Zonke izinsuku nangazo zonke izimpelasonto, umuntu egubha into ethile kungaba wusuku lokuzalwa noma okuthile akuzuzile, konke lokho kudinga ukudla, ikhekhe nesiphuzo esizohambisana nakho.”
UZamancube “uSammy” Mncube wumlingisi, usomahlaya nomethuli wezinhlelo waseMgungundlovu osehlala eMelika ngenxa yomsebenzi wobuhlengikazi awenza eceleni. Wenza izifundo zokulingisa e-Next Stop NY khona eMelika
Yebo, nganginikwa imali kusukela ngifunda amabanga aphansi ngaze ngafika emabangeni aphezulu. (Ngenza) amabanga aphansi nganginikwa uR5, kwathi sengifunda amabanga aphezulu ngaqala nganikwa uR10.
UMnu uSiphakamiso Duma, umsunguli weDuma Wines yaseThekwini, KwaZulu-Natali
Obeshaya isisefo esitolo sokudla usenewayini elithi yena. Uxoxe noSIMANGALISO NTSHANGASE
UWUMUNTU ohlale ezihlupha ngokuthi uhlobo nohlobo lomkhiqizo lwakheke noma lwenziwa kanjani. Loku kuzihlupha ngolwazi yikona okumenze wafisa uzicija ngokuthi iwayini livutshelwa kanjani.
Indaba yomonakalo wezibhelu ixoxwa ngezithombe
Izithombe: yiSAPOA, zithunyelwe noGoogle
Ungoti uthi akufanele basolwe osomabhizinisi abazophosa ithawula, bashaye bachithe uma sebekhokhelwe wumshwalense. USLINDILE KHANYILE uyabika
IZINKAMPANI eziningi sezikhiphe imiyalezo ezibophezelayo ekwakheni kabusha nasekuvuseleleni izitolo ezilimale ngenxa yezibhelu zangesonto eledlule. Nokho bakhona abazophosa ithawula kanti akufanele basolwe abasolwe ngalokho. Usho kanje ungoti wemboni yezakhiwo, uNksz uLynette Ntuli, oyisikhulu esiphezulu se-Innate Investment Solutions.
UNkk uNontsikelelo Magwaza, umnikazi weMrs Hairfidence ecwala izinwele
Owasukunyiswa wuthando lokufunda indlela elula yokunakekela izinwele zemvelo uyadlondlobala ebhizinisini lokucwala izinwele. Uxoxe noZIMBILI MAZIBUKO
UKUNAKEKELA izinwele zemvelo yinto abanye abayibona inzima nokungakho begcina bezifaka amakhemikhali okuzithambisa ukuze zingabi buhlungu. Yiloku kanye lokhu okwakhuthaza umnikazi wenkampani yemithi yezinwele.
Asizile bese siyasukuma sakhe iNingizimu Afrika ezosinakekela sonke, kuloba uLebo Madiba
SEKUPHELE isikhathi esingaphezu konyaka manje siphila nobhubhane iCOVID-19 kanti leli sonto eliphelile selisilethele inkinga entsha – izibhelu ebezithe chithi saka.
Masisukume sakhe umnotho wethu singabantu abamnyama, kuloba uNtokozo Biyela
NGESONTO elidlule ngithinte indaba ebucayi yokucekelwa phansi kwempahla nomnotho ikakhulukazi KwaZulu-Natali naseGauteng. Siyabonga ukuthi izibhelu ebezikhungethe lezi zifundazwe sezithe ukudamba. Manje-ke yini esibhekeke ukuthi siyenze ukulungisa isimo?
UMnu uMpumelelo Zikalala uchaza ngamacala azobekwa abatapi
UNksz uMbali Mlaba, umsunguli weThalitha Farms
Ungene kwezolimo ngoba esefuna umsebenzi ohlukile nefa azolishiyela izingane zakhe umlimi osimamayo kwezolimo. Uxoxe noZIMBILI MAZIBUKO
EMVA kokuqashwa iminyaka engaphezu kwewu-16 wayesefuna enye into azoziphilisa ngayo futhi wayazi ukuthi leyo nto kuzoba wukuzisebenza. Waqala wenza ucwaningo ngaphambi kokuyeka emsebenzini ebheka ukuthi yimuphi umkhakha angangena kuwona.
Umonakalo wokutapa nokushisa uzoholela ekuvalweni unomphelo kwamanye amabhizinisi
Amanye amabhizinisi ngeke esavuka ngemva kwezibhelu zokutapa. USLINDILE KHANYILE uyabika
“BAYISHISILE indawo yami kodwa abalushisanga uthando lwami. Ngizovuka noma ngingazi ukuthi kuzongithatha isikhathi esingakanani kodwa khona ngizovuka. Okubuhlungu nje wukuthi ukushayeka kwami wukushayeka (kwezisebenzi zami) futhi uma ngithatha isikhathi eside ukuvuka kusho ukuthi (nazo zizohlupheka) isikhathi eside.”
UNksz uSindi Cele, umnikazi weSU Skin Range, yezimonyo neziphaqulo
Uhlangane nezimonyo ngendlela, wazifundisa ngazo, lwakhula uthando oseluzale ibhizinisi lemikhiqiziso esidayiswa nakwamanye amazwe. Uxoxe noZIMBILI MAZIBUKO
UMUNTU nomuntu ube nephupho kodwa ubizo lwakhe ngeke alubalekele. Kube njalo nakumphaquli wobuso futhi onebhizinisi lezimonyo waseMlaza, eThekwini. Wafundela omunye umkhakha ukufeza iphupho lakhe kepha namuhla usengene shi emkhakheni ohlukile kunalowo awufundela esikoleni.
CISHE nomuntu owayengaqondi kahle ukuthi izinhlaka zomnotho zisebenzelana futhi ziphakelana kanjani ukuze yonke into isebenze ngomumo ubesekuqonda kahle loku emva kokuvalwa kwezwe ngenxa yokuhlasela kweCOVID-19 kusukela ngoMashi ka-2020. Ukubona kume … Read More
UMNOTHO waKwaZulu-Natali nasezingxenyeni zaseGauteng ezithintwe yizibhelu ezicekele phansi ingqalasizinda kwatatshwa impahla ezitolo uzobuyela esimweni maduze ngoba nezinkampani ezinkulu zizosizwa wumshwalense.
Kuleli sonto usaziwayo wuGubhela, ogama lakhe langempela wuNduduzo Mkhize. Uwumbhali nomhayi wezinkondlo zesiZulu nomhleli wemicimbi yobiciko ngaphansi kwenkampani yakhe iGubhela Brands. Ngo-2019 uhlabane ngendondo ye-Best Poet kumaSATMA Awards.
Lutho! Ngangingayiphathi ngisho nasesikoleni; kangangokuthi ngisho nabangani engagcina ngijwayelana nabo esikoleni ababenjengami, mina nabo sasingenayo imali njengezinye izingane esikoleni.
Bakhala bayazithulisa abadayisi basemigwaqweni okuzofanele baqale phansi emva kwezibhelu ezicekela phansi izinhlaka zomnotho
Izibhelu nokutapa kushabalalise amabhizinisi abadayisi basemgwaqweni asekhulise, afundisa izizukulwana. USLINDILE KHANYILE uyabika
OMUNYE wabadayisi basemgwaqweni onetafula esangweni lokuphuma eSiyaya, eMgungundlovu, KwaZulu-Natali, useneminyaka ecela ku-35 ondla umndeni wakhe ngalo njengoba edayisa amaveji kulona.
Usomnotho ozimele uMnu uDuma Gqubule uthi loku esibhekene nakho yisibhicongo esithinta impilo yabantu ngaphezu kokuba yisibhicongo somnotho
Usizi losomabhizinisi abancane, indlala, ububha nokuntuleka kwemisebenzi kusazothi bhe eNingizimu Afrika. USLINDILE KHANYILE noSIMANGALISO NTSHANGASE bayabika
KUSENZIMA nokuchaza kahle ngobukhulu bomonakalo owenzeke kugqekezwa isakhiwo sebhizinisi labo lokuhlanza amanzi bese bewakhiqiza esewuhlobo lwe-still ne-alkaline kuMnu uMondli Xaba waseRichards Bay, eNyakatho yeKwaZulu-Natali.
Lafa elihle kakhulu isizwe esimnyama sivukelana sodwa, kuloba uNtokozo Biyela
NGIBHALA le ngosi inhliziyo yami igobhoza igazi ngezenzo zobelelesi nokulinyazwa kwempahla esizibone KwaZulu-Natali naseGauteng. Sesivaleleke ezindlini njengeziboshwa ezweni lobabamkhulu. Okubuhlungu kakhulu wukuthi umnotho waseNingizimu Afrika usuwile futhi kusazoba nobubha nokukhala nokugedla kwamazinyo okukhulu.
Ukucekela phansi umnotho kuzozwela kakhulu kwabantulayo nentsha, kuloba uBonke Dumisa
NGIVAME ukuthi indaba ayikho ekuqineni kwamandla erandi kodwa isuke ilele emalini yakwamanye amazwe esihlale sibheka ukwehla nokwenyuka kwayo.
UMnu uLebohang Leoatle, umlimi waseMatatiele, eMpumalanga Kapa
Ungene kwezolimo ngoba efuna ukunciphisa izindleko zokudla komndeni wakhe. Uxoxe noSIMANGALISO NTSHANGASE
“NGAHLALA phansi ngacabanga ngabuka ukuthi kumele kube khona engikwenzayo. Bese ngikhathele wukuthenga ngisho nohlobo lokudla engingazikhiqizela kona ngokwami.”
UMnu uMpumelelo Zikalala uchaza ngokusebenza kwesikhwama esilekelela abaphelelwe wumsebenzi i-Unemployment Insurance Fund
UMnu uSamukelo Zwane, i-head of product eFNB Wealth and Investment Management Solutions
Izinto okumele uziqaphele uma ulondolozela ukuya empeshenini. USLINDILE KHANYILE uyabika
KUMQOKA ukuthi abantu baqonde ukusebenza kwenzalo ezala phezu kwenye, phecelezi i-compound interest, umhlomulo wentela nokuthi asebenza kanjani amandla emali ngomuso, phecelezi i-future inflation, uma belungiselela umhlalaphansi.
UNksz uLindiwe Masuku, umnikazi weSpit Braai on Wheels yaseThekwini, KwaZulu-Natali
Usungule ushisanyama oya emizini yabantu ngoba egqugquzelwa wuthando lokudla. Uxoxe noSLINDILE KHANYILE
UYAKUTHANDA ukudla okumnandi futhi okuhlelwe kahle. Uyakuthanda nokuphekela abantu kodwa wayazi ukuthi uma esungula ibhizinisi lokupheka ufisa elizogxila enyameni, lihlanganise abantu kodwa lihluke kokwejwayelekile.
UMnu uLindo Makhaye, umsunguli weLusizo Group
Wakhuthazwa wukubona uninalume ezisebenza oseneminyaka ewa evuka namabhizinisi. Uxoxe uSLINDILE KHANYILE ngohambo lwakhe
KUWUKUQHATHA nokufakela amabhizinisi asafufusa ingcindezi ukuwathwesa ijoka lokuthi kumele asungule imisebenzi. Amabhizinisi amancane kumele agxile ekutheni enze inzuzo bese kuthi ngenxa yaleyo nzuzo asengavela amathuba emisebenzi.
IKhomishini inxuse iCompetition Tribunal ivumele uMr Price, isitolo sezimpahla ezihlukene njengezokugqoka, ezemidlalo nefenisha, ukuthi ithenge uYuppiechef. U-Mr Price unezitolo eziwu-183 eNingizimu Afrika. U-Yuppiechef yisitolo esigxile ekudayiseni izimpahla zasekhishini, ifenisha nezikagesi.
I-FNB izoqhubeka nezinhlelo zokutshala emphakathini ngokuvula amagatsha awu-50 kuze kube wu-2023. Loku kuhambisana nezinhlelo zokufinyelela kuzona zonke izinhlobo zamakhasimende ezweni lonke. Amagatsha omphakathi azoba wu-70 kuya ku-90‬m2 ubukhulu. Azodla ngobuchwepheshe besimanje obuseqophelweni eliphezulu, adidiyele izindawo zokuzisa kumakhasimende noma asizwe.
UNksz uPhindile Tulisa, umnikazi wePhindi’s Accessories Designs eyenza amacici
Waqala ezidlalela ngezicucu nezinye izinto endlini osenebhizinisi lamacici elisabalele nakwamanye amazwe. Uxoxe noZIMBILI MAZIBUKO
UBANI ongacabanga ukuthi amafosi ezicathulo newuli kungagcina kwakhe ibhizinisi elondla umndeni womuntu? Kwabanye cishe wumqondo ongeke ufike lona. Kodwa ibhizinisi lamacici lentokazi esencane liqalwe kanjalo.
Kuleli sonto kuSAZIWAYO NEMALI sinethulela uMsawenkosi ‘Msajero’ Mbonambi, umsakazi weZwi LoMzansi. Usakaza uhlelo i-Musotherapy olungena ngoLwesihlanu ngo-3 entathakusa kuya ku-6 ekuseni nangeSonto
Lutho mntakababa, sasingaphiwa nhlobo imali ekhaya. Uma kuthuke kwaqabukela kwaba khona isihlobo esingiphe imali, ngangiyibeka ngiyisebenzise ukuthenga izimpahla zokugqoka esikoleni.
UNkk uZanele Sishi, umnikazi weStichedByZan yaseGoli, eGauteng, ethunga izingubo
Owaqala ezithungela izingubo ngoba engenayo imali yokuzithengela umswenko usethunga imisiko edle ngokukhanga nokuhluka. Uxoxe noZIMBILI MAZIBUKO
UBUHLUNGU bokungakwazi ukuthenga ingubo entsha yokuya emcimbini yinto abanye abantu besifazane abake babuzwe. Kokunye basuke bengenamali yokuthenga kanti kwenye inkathi wukuthi izimpahla ezikhona aziwufanele umcimbi abamenywe kuyona.
Kunezinguquko ezizojabulisa ababeka imali yempesheni i-retirement annuity abaxakekile
Ikhushuliwe imali ongayikhipha esikhwameni sempesheni ngisho singakafiki isikhathi sokuya empeshenini. USLINDILE KHANYILE uyabika
UMNYANGO wezeziMali umemezele kuleli sonto ukuthi kunqunywe ngokusemthethweni ukukhushulwa kwemali umuntu avumeleke ukuyikhipha esikhwameni sempesheni esizimele uma kuyisikhwama angasasikhokheli.
UNksz uNontobeko Molefe, umnikazi we-Okebonton Makeup ephaqula ubuso
Ukubambela ozakwabo emsebenzini kwamholela lapho athola khona ubizo lwakhe osebalwa nabaphaquli bobuso abayinyama. Uxoxe noZIMBILI MAZIBUKO
AKUJWAYELEKILE ukuthi umuntu ongenalwazi lwento ethile futhi angayifundelanga agcine esefana nochwepheshe kuyona. Nokho kunjalo kumnikazi webhizinisi lokuphaqula abesifazane nabesilisa ukuze babukeke kahle.
Uxamu ugeje umgodi ngaloku kuvalwa kwezwe, kuloba uBusi Mavuso
NGISHILO ngesonto eledlule ukuthi ukunqunywa kwesikhathi esithile sokuvalwa kwezwe kukhombisa ukuthi uhulumeni ucabangisisile ukuze abhalansise ubungozi nemihlomulo yemizamo ehlukene. Loku kungcono kunokuvalwa kwezwe okunganqunyelwe sikhathi, okuvele kuvale amabhizinisi ngisho kungasabhekwanga ubungozi bawo nemiphumela yaloko kuvalwa.
Sekudingeka sizibambe ziqine ngempela manje, kuloba uNtokozo Biyela
UKUSHINTSHWA kwemigomo yokusebenza kwezamabhizinisi ngenxa yesiwombe sesithathu seCOVID-19 kubeka iNingizimu Afrika, i-Afrika nomhlaba wonke kwenye ingcindezi ebingalindelekile kwezomnotho, ikakhulukazi emabhizinisini amancane ezweni.
UMnu uMpumelelo Zikalala uhlaziya isicelo sikaMnu uJacob Zuma sokuzama ukushintsha isinqumo seNkantolo yoMthethosisekelo esimgwebe izinyanga eziwu-15
Izelamani zakwaMncube ezingabasunguli be-Ilimo Farmers uCebile, uZandile noNokubongwa
Izelamani zidudane ngokusungula ibhizinisi lezolimo elichumayo manje. Esisodwa sixoxe noSIMANGALISO NTSHANGASE
UKUSHISEKELA ukungena kwezamabhizinisi njengomndeni ngesinye sezizathu esenze izelamani zasungula ibhizinisi lokufuya izinkukhu.
UNksz uNelly Shozana, umsunguli we-Intentionally Elegant Publishers neBook Behind Awards
Isidalo sakhe, izinto adlule kuzona ziyisisekelo sebhizinisi lakhe. Uxoxe noLANGA KHANYILE
WAKHULA engenaphupho. Mhlawumbe kwakufanele ngoba inkungu yayisathe mbo, nakhu wayeseyintombazanyana emsulwa, ingakawazi umhlaba. Kepha namhlanje iphupho lakhe licace bha egameni lenkampani yakhe – i-Intentionally Elegant Publishing.
UMnu uMfundo Dzanibe, umsunguli weMzansi Africa Education
Ulandele igama lakhe osemnkantshubomvu emabhizinisini agxile kwezemfundo. Manje usenabela kwawobuchwepheshe besimanje nokwengeza izikole ezizimele ezenganyelwe ngabantu abamnyama. Uxoxe noSLINDILE KHANYILE
EMVA kweminyaka ewu-20 esungule futhi wakhulisa amabhizinisi amabili ayeqhuba kahle, wanquma ukuyofundela ukuphathwa kwamabhizinisi.
UNGQONGQOSHE wezeziMali uMnu uTito Mboweni useqoke ithimba elizomeluleka ngezindaba zokuphathwa kwempesheni yezisebenzi zikahulumeni kwiGovernment Pensions Administration Agency. Leli komidi eliqokwe iminyaka emithathu libunjwe wu-Adv Muvhungo Lukhaimane, ongusihlalo walo, uNksz Maemili Ramataboe, uMnu uBeerson Baboojee noMnu uHiggo du Toit.
I-RIO Tinto neRichards Bay Minerals bamemezele ukuthi bamisa ukusebenza kwabo ngenxa yezinkinga ezikhona kule nkampani njengoba emasontweni ambalwa edlule kubulawe nomphathi wakwandabazantu uMnu uNico Swart. Le nkampani, engenise uR8 billion emnothweni waseNingizimu Afrika ngo-2020, ithe nakuba izokwenza konke okusemandleni ukunciphisa umphumela omubi walesi sinqumo kodwa kumele ibeke eqhulwini ukuphepha kwezisebenzi zayo.
I-TRANSNET ivumelene nezinyunyana ukuthi izonyusa imiholo yezisebenzi zayo ngo-5% ngalo nyaka wezimali.
I-DENEL isiqoke uNksz uTshidi Makgabudi njengelungu lebhodi layo nosihlalo wekomidi elibheke ukucwaninga amabhuku.
I-TONGAAT Hullett iqoke uMnu uDavid Noko njengelungu lebhodi layo kusukela ngoJulayi 1.
Mhla ka-30 kuJuni iSouth African Reserve Bank yethule oR5 abasha bokugubha iminyaka ewu-100 yasungulwa. Le mali, eveza imidwebo yoR5 abadala, yaphasiswa ngokusemthethweni mhla ka-27 Novemba ngo-2020. LaboR5 bazoqhubeka nokusebenza kanyekanye nabadala kanti inani lalaba abasha liyalingana nelo R5 abadala abavele bekhona.
Umhlahlandlela wokuqhudelana iGuidelines for Competition in the South African Automotive Aftermarket uqalile ukusebenza mhla ka-2 kuJulayi. Umkhombandlela wokugcina wakhishwa mhla ka-29 ngoJanuwari kanti usuyatholakala kwi-website yeKhomishini. Lo mkhombandlela uhambisana ne-Competition Act (u-89 wango-1998, ebuyekeziwe) ukuklama indlela ekunqandeni izinto eziphikisana nokuqhudelana okuhle embonini yokunakekela nokulungisa izimoto esezidayisiwe, phecelezi i-automotive aftermark, ukwenza ukuthi osomabhizinisi abancane nabantu ababencishwe ithuba bakwazi ukubamba iqhaza. Lo mkhombandlela uphoqa ukuthi bonke abasembonini yezimoto badalule imininingwane ethile emakhasimendeni ukwenza ukuthi akwazi ukuthatha izinqumo ezifanele futhi kube nokuphepha kule ndima. Kukhona nendawo yokuthi bonke abakulo mkhakha bakwazi ukuxazulula izinkinga uma bengezwani futhi bazigade bona. Umkhombandlela wonke uyatholakala ku: https://www.compcom.co.za/guidelines/
UNksz uLondiwe Shezi, umnikazi weSilo Brides yemvunulo yesintu ne-Utahwashe Kiddies Spa
Wenza ezibukwayo ngohlobo lwamabhizinisi olungajwayelekile kanti elinye useliphendule i-franchise. Uxoxe noZIMBILI MAZIBUKO
UQALE eneminyaka ewu-17 ukuba nothando lokuzisebenza nokwakha amathuba omsebenzi.
Kuleli sonto kuKUSAZIWAYO NEMALI sinethulela uDudu Busani-Dube, umlobi wezincwadi nentatheli. Udume ngezincwadi eziwuchungechunge iHlomu The Wife, Zandile The Resolute noNaledi His Love. Zisanda kulanywa yiQunga ne-Mess
Cha. Ngangiye nginikwe uR2 uma ngingasiphethe isikhaf’tini esikoleni.
UMnu uThinah Zungu, umculi we-gospel, usengenise emabhizinisini
Udume ngomculo wokholo kanti lolo dumo uselwenze lwamsebenzela njengoba esexhantele kwamanye amabhizinisi. Uxoxe noZANELE MTHETHWA
KUSUKELA ngonyaka odlule ubemandla ezinkundleni zokuxhumana encoma isithukuthuku sakhe ngoba ubejatshuliswa wumuzi oyisitezi awakhile.
Umphathi weBhange loMbuso uMnu uLesetja Kganyago
Kugcizelelwe ukubaluleka kweBhange loMbuso ligubha iminyaka ewu-100. USLINDILE KHANYILE uyabika
KUMQOKA ukuthi iBhange loMbuso lihlale lizimele, libe nesithunzi futhi uma lenza izinqumo lingabuswa wukuthi umoya uvunguzela ngakuphi kodwa izinqumo elizenzayo kumele zilawulwe wukuthi yini elungele isimo somnotho salelo zwe.